LIVE SUUQA & SAAKA: Diego Costa oo ka tagay Chelsea – Man City oo maanta saxiix ku dhawaaqeysa – Azpilicueta oo beenlow ku sheegay Mourinho – mustaqbalka Paul Pogba, Mkhitaryan & Walcott – Maxaase ka cusub kooxdaada? | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » LIVE SUUQA & SAAKA: Diego Costa oo ka tagay Chelsea – Man City oo maanta saxiix ku dhawaaqeysa – Azpilicueta oo beenlow ku sheegay Mourinho – mustaqbalka Paul Pogba, Mkhitaryan & Walcott – Maxaase ka cusub kooxdaada?
LIVE SUUQA & SAAKA: Diego Costa oo ka tagay Chelsea – Man City oo maanta saxiix ku dhawaaqeysa – Azpilicueta oo beenlow ku sheegay Mourinho – mustaqbalka Paul Pogba, Mkhitaryan & Walcott – Maxaase ka cusub kooxdaada?
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 22-06-16 8:12 AM Subaxnimo wanaagsan, aqristayaasha shabakadda ciyaaraha kulaad.com, meelkasta oo aad joogtaan, kusoo dhawaada sheekooyinkii saaka ugu sareeya suuqa iyo wararka wargeysyada England ay daaabaceen.
Xubintaan subax kastaaa ayaad kala socatanaa shabakadda kulaad.com, oo markasta u taagan sidii aqristayaasheeda ay ugu soo gudbin laheyd waxyaabo xiiso badan.
Xiddiga Chelsea Diego Costa ayaa la sheeegay in uu xiriir joogto ah la leeyahay kooxdiisii hore ee Atletico Madrid macalinka hogaamiya ee Diego Simeone.
Raul Meireles ayaa dib ugu laaban doona Horyaalka England isagoo wadahadalo kula jira kooxda Bournemouth sida ay sheegayaan wararka dalka Turkiga ka imaanaya.
Borussia Monchengladbach ayaa shaaca ka qaaday in ay diyaar u tahay la wareeegida xiddiga amaahda ah oo ay leedahay koxda Chelsea Andreas Christensen.
Manchester City ayaa dooneysa inay heshiis weyn ku qanciyaan xiddiga kooxda Schalke Leroy Sane maanta oo Arbaco ah – laakiin Bayern Munich ayaa ku haysta heshiiska.
Xiddiga Chelsea Cesar Azpilicueta ayaa beeniyay in wax xiriir ah uu la leeyahay tababaraha cusub ee Manchester United Jose Mourinho.
Juventus ayaa xaqiijisay in uusan iib aheyn Paul Pogba, oo bartilmaameed u ah Man United iyo Real Madrid.
Madaxweynaha Napoli Aurelio De Laurentiis ayaa sheegay in bartilmaameedka Chelsea Kalidou Koulibaly kooxda lasii joogi doono.
Manchester United ayaa sare u qaaday wadahadalka ay kula jirto Henrikh Mkhitaryan iyadoo £ 28m kusoo qadaneysa.
Chelsea ayaa ka dhigtay suurta gal in ay soo iibsadaan daafaca kooxda Napoli Kalidou Koulibalyoo ay miiska u saareen £ 19.2m.
Theo Walcott ayaa doonaya inuu sii joogo Arsenal ugu yaraan xilli ciyaareed kale, inkastoo ay xiiso u qabaan Liverpool iyo West Ham.
Manchester City ayaa ku dhow inay dhameystirto saxiixa £ 13.8m kagu qiimeeyay ee Nolito
Mats Hummels ayaa shaaca ka qaaday inuu ka fikirayay ku biirista Manchester United ka hor inta uusan u dhaqaaqin Bayern Munich ,lakiin kooxda oo aan usoo bixin Champions League aya keentay inuu iska diido.
Everton ayaa wadahadalo heshiis £ 16 milyan kula jirta weeraryahanka Porto Vincent Aboubakar
bartilmaameedka Manchester City Pierre-Emerick Aubameyang ayaa weli doonayo inuu ka tago Dortmund xagaagan, xili Atletico Madrid ay soo gashay tartanka loogu jiro saxiixiisa.
Real Madrid ayaa qaaday talaabadii ugu horaysay oo heshiis weyn ku keeneyso, ciyaaryahanka khadka dhexe ee Juventus Paul Pogba ayay wada hadaal la qaaateen wakiilkiisa.